Real Madrid Oo Hogaamineysa Tartanka Loogu Jiro Saxiixa Xiddiga Bayern Munich Serge Gnabry.
HomeWararka CiyaarahaReal Madrid oo Hogaamineysa Tartanka loogu jiro saxiixa xiddiga Bayern Munich Serge Gnabry.
Real Madrid ayaa lagu soo waramayaa inay hogaanka u hayso safka loogu jiroweeraryahanka Bayern Munich Serge Gnabry .
26-sano jirkaan ayaa mar kale u ahaa ciyaaryahan muhiim u ah kooxda heysata horyaalka Bundesliga xilli ciyaareedkii 2021-22, isagoo dhaliyay 17 jeer, waxaana uu gacan ka geystay 10 caawin 44 kulan oo uu saftay tartamada oo dhan.
Laacibka heerka caalami ee dalka Jarmalka ayaa wax ka yar 12 bilood uga harsan tahay inuu ku sii socdo qandaraaskiisa haatan ee Allianz Arena, si kastaba ha ahaatee, waxaa jiray warar badan oo ku saabsan mustaqbalkiisa dhowrkii toddobaad ee u dambeeyay.
Warbixin dhawaan soo baxday ayaa lagu sheegay in Gnabry uu iska diiday fursad uu heshiis qaali ah ugu saxiixi lahaa Bayern, kaasoo heegan sare galiyay kooxaha Arsenal iyo Tottenham Hotspur .
Liverpool iyo Juventus ayaa sidoo kale horay loogu tiriyaa inay xiiseynayaan, laakiin sida laga soo xigtay Fichajes , Real Madrid ayaa haatan ugu cadcad adeega Jarmalka.
Gnabry ayaa la sheegay in loo soo bandhigay fursad uu ku laba jibaaro mushaarka uu ka qaato Bayern oo lagu qiimeeyo 14 milyan ginni.
Heshiiska cusub ee la soo jeediyay ayaa ka garab ciyaari doona Kingsley Coman iyo Leroy Sane marka loo eego dadka ugu dakhliga badan Allianz Arena, laakiin da’yarkii hore ee Arsenal ayaa lagu soo waramayaa inuusan dareemayn inay qiimeeyaan kooxda reer Jarmal, isla markaana uusan hubin inuu lahaan doono door hogaamineed oo hore u socda.
Xilli ciyaareed cajiib ah oo uu ku qaatay Werder Bremen ayaa u horseeday Bayern inay la soo wareegto 2017, waxaana uu u saftay 170 kulan kooxda tartamada oo dhan, isagoo u dhaliyay 64 gool, waxaana loo diiwaan geliyay 40 caawin.
Gnabry ayaa markale qaab ciyaareed heer sare ah ku soo bandhigay Bundesliga xilli ciyaareedkan isaga oo dhaliyay 14 gool sidoo kale diwaan galiyay 6 caawin 33 kulan oo uu saftay halka uu saddex gool ka dhaliyay tartanka champions League xilli ay kooxdu gaartay wareega 8 dhamaadka ka hor inta ayna guuldaro kala kulmin Villarreal.
Bayern kuma jirto meel xoogan oo ay ku dalban karto lacag qaali ah oo ay kula soo wareegayaan jarmalka, waxaana ay halis ugu jiraan inay si xor ah ku waayaan xagaaga soo aadan hadii xal loo heli waayo.